काठमाडौं, ९ चैत । सत्तारुढ नेकपाले विद्रोही नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई पेरुको गोञ्जालो बनाउने रणनीति लिएका छन् । पेरुमा क्रान्ति उत्कर्षमा पुगेको बेला त्यहाँका क्रान्तिकारी नेता गोञ्जालोलाई पक्राउ गरेर जन्मकैदको सजायँ दिइएको थियो । उनलाई जेल राखेसँगै पेरुको क्रान्तिकारी आन्दोलन कमजोर भएको थियो ।
जनयुद्धको बेला प्रचण्डले कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा पेरुको गोञ्जालोको उदाहरण दिने गर्दथे । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विद्रोहमा जाने कि शान्तिपूर्ण बाटोबाट संविधानसभामार्फत् अगाडि बढ्ने भन्ने दुई लाइन संघर्ष चल्यो ।
जब माओवादीहरु पालुङटार प्लेनमा पुगे, त्यहाँ प्रचण्ड र किरणले विद्रोहको लाइन रोजे भने बाबुराम भट्टराईले शान्तिपूर्ण बाटो । प्रचण्डहरुले काठमाडौंमा असफल जनविद्रोहको अभ्यास पनि गरे । चलाख प्रचण्डले आफ्नो निर्णयमा त्रुटि भएको थाहा पाएर बाबुरामको लाइनमा आइहाले । तर, नीतिमा ‘इमान्दार’ वैद्य र विप्लवहरु क्रान्तिकै बाटोमा लागे ।
विद्रोहको अभ्यासको बेला र सेना समायोजनको बेला प्रचण्डले विप्लव लगायतका कमाण्डरहरुलाई ठूलो मात्रामा हतियार लुकाउन दिएको माओवादी कमाण्डरहरु बताउँछन् ।
अहिले सरकारमा रहेका प्रचण्डलाई त्यही आफैंले दिएको अत्याधुनिक हतियारको चिन्ता छ र बारम्बार आफू असुरक्षित रहेको भाषण गर्दै आइरहेका छन् । उनले भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि ५९ सुरक्षाकर्मी थपेर मनभित्रको भयलाई सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले पछिल्लो समय विप्लवलाई कसरी सिध्याउने भन्ने बारेमा ओलीसँग लामो संवाद गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । आफ्नो युद्धकालीन रणनीति र अनुभवलाई प्रयोग गरेर पछिल्लो विप्लव विरुद्धको प्रतिबन्ध र उनलाई गोञ्जालोको नेपाली संस्करण बनाउने प्रचण्ड-ओली रणनीति बनेको हो ।
‘प्रतिबन्धको निर्णयपछि पूर्वमाओवादीहरुकै विरोध पछि विप्लव समूहलाई हत्या गरेरै सिध्याउने रणनीतिबाट सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय पछाडि हटेको हो,’ विद्रोही नेकपाका एक नेताले भने, ‘हामीलाई जेलमै राखेर सिध्याउने उनीहरुको रणनीति देखिन्छ, जुन कदापि सम्भव छैन ।’ उनले राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्न नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रसँऊ पनि झस्किनु पर्ने सत्तारुढ कम्युनिष्टहरुको हालत देख्दा दया लाग्ने अनुभूति सुनाए ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार विप्लवलाई पक्राउ गरेपछि उनीमाथि जन्मकैदको सजायँ दिइनेछ । फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सत्तारुढ नेकपाले विद्रोही नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
नेपालको इतिहासमा ००७ सालपछि मातृका कोइरालाले कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए भने पञ्चायतमा राजा महेन्द्रले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसपछि चरम संकटकालमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिएनन् ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले विप्लव नेकपालाई राजनीतिक व्यवहार नगर्ने र उसका सबै गतिविधि नियन्त्रणमा संगठित र फौजदारी अपराधसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने घोषणा गरेको हो ।
नेपाल प्रहरी स्रोतका अनुसार सरकारले विप्लव समूहका गतिविधि विध्वंसात्मक र आपराधिक भएको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले प्रचलित संगठित अपराध ऐन २०७० र फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार कारबाही अघि बढाउन सुरु गरिसकेको छ । प्रहरीले यही सन्देशलाई देशभरी सर्कलर पनि गरिसकेको छ ।
विद्रोही नेकपाका प्रमुख नेताहरु पक्राउ गरेर जेलमा राखेपछि उक्त पार्टीको गतिविधि स्वत् समाप्त भएर जाने नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले रणनीति बनाएको पूर्वमाओवादीका एक असन्तुष्ट नेताले जानकारी दिए । यही रणनीतिअनुसार विद्रोही नेकपाका तेस्रो वरियताका नेता हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शन शुक्रबार बेलुका पक्राउ परिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोलीले ‘सर्च अपरेशन’ नै सुरु गरेको छ । ०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेपछि सरकारले यस्तै अपरेशनहरु सुरु गरेको थियो ।
यहाँ हामीले कम्युनिष्ट नेता हस्तबहादुर केसीद्वारा लिखित आलेख समावेश गरेका छौं-
सोभियत मोडेलको समाजवादको पतनसँगै विश्वकम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको बेलामा पेरुमा नयाँ किसिमबाट सशस्त्र जनयुद्ध संचालन गरि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्ने कार्यमा पेरु कम्युनिष्ट पार्टी (साइनिङपाथ) ले सन् १९८१ मा ऐतिहासिक पहल गर्‍यो । पेरुमा संचालित जनयुद्धले छोटो अवधिमा गाउँ देखि शहर घर्ने सिद्धान्त बमोजिम केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने तहसम्म विकास गरेर सबै खाले संशोधनवादी, प्रतिक्रियावादी तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वर्गमा ठूलो भूइचालो ल्याइदियो । अनि पेरुका क्रान्तिकारी जनता, विश्वका भाइचाराहरुमा आशा र उत्साहको सञ्चार पैदा गरिदियो ।
यसको प्रभाव नेपालमा पनि निकै परेको थियो र नेपालका माओवादी क्रान्तिकारीहरुले पनि “हाम्रो झण्डा पेरुमा फरर….” भने गीत समेत घनकाएका थिए । सन् १९५३ मार्च ५ तारिखका दिन रुसका नेता जोसेफ स्टालिनको निधन भयो । त्यस पश्चात सोभियत रुसम प्रतिक्रान्ति भयो । यसले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र समाजवादी शिविरमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो ।
यसैक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा माओत्सेतुङद्वारा नेतृत्व गरिएको क्रान्तिकारी धारा र ख्रुश्चेवद्वारा नेतृत्व गरिएको दक्षिणपन्थी अवसरवादी धाराका बीच भीषण दुईलाइन संघर्ष चल्यो । अन्तः अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन क्रान्तिकारी र अवसरवादी धारामा विभाजित हुन पुग्यो । यसैक्रममा माओद्वारा प्रतिपादित सर्वहारा अघिनायकत्व अन्तर्गत क्रान्तिका निरन्तरको सिद्धान्तको मान्यताका आधारमा १९६६ देखि १९७६ सम्म महान् सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्ति संचालन गरियो ।
यो क्रान्ति एकैसाथ दुइलाइन संघर्ष र वर्गसंघर्षको एक संश्लेषित अभिव्यक्ति थियो । यसैक्रममा माओले बिचारधारात्मक तथा राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले नै सबैथोकको निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिदै ‘तीन गर तीन नगर, एकताबद्ध होऊ नफूट, प्रष्ट र खुला होऊ, छलछाम र षडयन्त्र नगर’ भन्ने उर्दी जारी गर्नु भयो । अतः महान् सर्वहारा साँस्कृतिक एक युगान्तकारी ऐतिहासिक कदम थियो । तर सन् १९७६ सेप्टेम्बर ९ तारिखका दिन माओको निधन भयो । त्यस पश्चात चीनमा पनि प्रतिक्रान्ति भयो । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन र समाजवादी क्रान्तिको इतिहासमा अर्को गम्भीर धक्का पुग्न गयो ।
यस पश्चात मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको पथप्रदर्शनमा कतिपय कम्युनिष्ट पार्टी र संगठनहरुले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुनः संगठित गर्नका लागि १९८० मा पहल शुरु गरे । फलतः १९८४ मा क्रानितकारी अन्तर्राष्ट्रियवादी आन्दोलन (रिम) को गठन हुन पुग्यो । यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आशाप्रद तथा साकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।
चीनको सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको प्रभावमा चारु मजुमदारको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थि संशोधनवादका विरुद्ध संघर्ष चलाउदै भारतमा सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गरियो । यसले सिँगो दक्षिण एशीयामा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको विरोध र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट धाराको विकासका लागि ठूला प्रभाव पारेको थियो । यसै प्रक्रियामा क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियवादी आन्दोलनसित सम्बद्ध तथा असम्बद्ध कतिपय पार्टीहरुद्वारा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि फिलिपाइन्स, टर्की, पेरु, नेपाल लगायतका देशहरुमा सशस्त्र जनयुद्धको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । भारतमा पनि सशस्त्र जनयुद्ध प्रभावकारी ढंगले विकसित हुँदै गयो ।
पेरु पश्चिम दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हो । यसको दक्षिण प्रशान्त महासागरसँग सिमा जोडिएको छ । यो चिली र इक्वेडरको बिचमा पर्दछ । यसको क्षेत्रफल १२८५२२० वर्ग किलोमिटर छ । यसको जनसंख्या करीब ३० करोड छ । यसको राजधानी लिमा हो । सन् १९८० को दशकमा पेरु कम्युनिष्ट पार्टी (साइनिङ पाथ) का अध्यक्ष गोन्जालोको नेतृत्वमा संचालित जनयुद्धले पेरुमा एकैदम छिटो विकास गर्‍यो । गाउँदेखि शहर घेर्ने रणनीति अन्तर्गत त्यस जनयुद्धले राजधानी लिमा सहित तीनवटा मुख्य शहर र अन्य गावैगाउले भरिएको पेरुमा जनयुद्धले सम्पूर्ण पहाडी गाउहरु र दुइवटा शहरहरुसमेत कब्जा गरेर राजधानी लिमा कब्जा गर्न चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्ने सम्मको विकास गरि सकेर केन्द्रीय सत्ता कब्जाको नजिक पुगि सकेको थियो ।
धेरैले पेरुको नयाँ जनवादी क्रान्तिले गंभीर प्रकारको धोका खानको मुख्य कारण गोन्जालोको गिरफ्तारीलाई मात्रै लिने गरेका छन् भने कतिपयले आन्तरिक कारणलाई मात्रै बताउने गरेका छन् । त्यहाँको क्रान्तिले धोका खानुको मुख्य कारणत आन्तरिक नै हो, गोन्जालोको गिरफ्तारी बाह्य कारण हो । तर पनि गोन्जालोको गिरफ्तारीले क्रान्तिलाई निकै नै क्षति पुर्‍यायो । गिरफ्तारीको घटना पछि पार्टी भित्र विचारधारात्मक अन्तः संघर्ष पैदा हुनु पनि स्वाभाविक थियो, त्यो भया नै ।
यो विश्लेषण गरिरहँदा गोन्जालोको बारेमा जानकारी राख्न पनि जरुरी छ । ८४ वर्षीय कमरेड गोन्जालोको वास्तविक नाम डा. अविमायल गुज्मन रेनोसो हो । उहाँ सन् १९३४, डिसेम्बर ३ मा एरक्वेपा, एण्डिज शृङ्खला पेरुमा जन्मनु भएको हो । एरक्वेपा विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका गोन्जालोले सन् १९६२ देखि १९७४ सम्म दर्शनशास्त्र बिभाग हवामांगा विश्वविद्यालय, आयाकुचो पेरुमा प्राध्यापन गर्नु भएको थियो । उहाको बिवाह सन् १९६४ फेब्रुअरीमा अगष्टा ला टोरेसँग भएको थियो । उहाँको राजनीतिक जीवन सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धमा फाँसीवादको पराजयमा खुसी मनाउन पेरुका वामपन्थीहरुले निकालेको जुलुसबाट गिरफ्तार भएपछि शुरु भएको थियो ।
पेरुमा केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरेर सर्वहारावर्गले सत्ता हातमा लिने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा कमरेड गोन्जालोलाई तत्कालिनी गिरफ्तार गरेर साइनिङपाथले सञ्चालन गरिरहेको सशस्त्र जनयुद्धलाई तहस नहस पार्ने उद्देश्य तत्कालिन अमेरिकी पिठ्यू फुजीमोरी सरकारले सोचेको थियो । गोन्जालोको गिरफ्तारीले त्यहाँको जनयुद्धलाई ठूलो घाटा भयो । नयाँ जनवादी क्रान्तिले गंभीर प्रकारको धक्का त व्यहोर्नु पर्‍यो । यो वास्तविकता हो । तर पनि पेरुको जनयुद्ध समाप्त भएको छैन । मन्दरुपमा पेरुमा जनयुद्ध जारी छ । पेरुको परिघटनाबाट संसारभरका क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले शिक्षा लिन जरुरी छ । र अहिले पेरुमा वास्तविक रुपमा के भइराखेको छ ? क्रान्तिकारीहरुको अवस्था के छ ? त्यहाँको क्रान्तिको भविष्य कस्तो छ ? आदि बारेमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान र संश्लेषणको खाँचो छ ।